केन्द्रिय नेताहरुदवारा माओवादी केन्द्रमा भाँडभैलो शुरु, महाधिवेशन गर्न माग (बिज्ञप्ति सहित) – Sanghiya Online
Posted on : December 26, 2017 - No Comment
काठमाडौँ । नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रमा भाडभैलो भएको छ । एमालेसँगको एकता हुनु कता कता पार्टीका असन्तुस्ट केही नेताहरु छुट्टै समूह बनाइसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गोपाल किरातीले आज छुट्टै समूह निर्माण गरेका छन् । उनले एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै ‘महाधिवेशन समूह’ नाम दिएका छुटै समूह बनाएको जनाएका छन् । किरातीको उक्त समूहले पार्टीको आठौं महाधिवेशनको माग गरेको छ ।
मंगलबार भएको भेलाले किरातीको संयोजकत्वमा उक्त समूह गठन गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग एमालेसँगको एकतालाई रोकेर पार्टीको आठौं महाधिवेशन गर्न माग गरेको छ । अन्तिमसम्म अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउने तर आफ्नो माग पूरा नभएर माओवादी केन्द्र पुर्नगठन गर्ने भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।
किराती दवारा जारि बिज्ञप्ति यस्तो रहेको छ :
ओलीको वडामा काँग्रेसको शानदार जित
जसपाका सांसदहरुको सपथ ग्रहणको समय तोकियो, यी सांसदहरु मन्त्रि बन्दै !
रौतहटमा उपेन्द्रको घोषणा: ओली सरकारको शोषण धेरै भयो अब चुप लाग्दैनौ सडक र सदन ठप्प
जनकपुरमा मोदी र ओली दुइटैको पुत्ला दहन, मोदी भुमि हडप्ने ओली तमाशा हेर्ने आरोप
यस्तो खेल जुन खेल खेलेर अबको प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव बन्न सक्ने सम्भावना बढ्यो
गृहमन्त्रालयले निकाल्यो नयाँ मर्यादाक्रम, कुन सरकारी पदाधिकारी कतिऔं स्थानमा? (सूचीसहित)